Akpọrepu flooring, Rubber taịl nile, n'ijikọta taịl nile, Rubber taịl nile, Ruber agba ọsọ Track - Top-Joy
Rubber agba ọsọ Track
Raw ihe akara
All na nsogbu dị iche iche nwere ike ike itighachi roba, na mama bụ nchebe na environmentally friendly, na-abụghị-emetọ. Ha na-erube nnọọ dị ka a na-hà mmepụta.
Production na akara
All na ngwaahịa na-nditịm dị ka EN14041: 2004 / AC: 2006. Anyị ga-eburu a certarin pasent nke ngwaahịa maka ule n'oge na-amalite na, n'etiti na ọgwụgwụ nke mmepụta. Test akụkọ ga-nyere.
Anyị ga-enye echichi ndu ahịa, dị ka nke ọma dị ka ngwa mkpa. Besieds, anyị ga-eji dochie ngwaahịa maka free ma ọ bụrụ na ha nwere àgwà nsogbu.
6mm Black na Yi EPDM Fleck n'ijikọta ...
20mm EPDM nsogbu dị iche iche mgbatị Rubber Ft taịl
Ime ụlọ EPDM Rubber flooring taịl mgbatị maka Tụlee ...
5/8 "Eco Arọ-eweli Room Rubber Ft ...
EPDM Commercial Rubber n'ala taịl maka mgbatị Equi ...
10mm Red High ike ọdụdọ recycled Rubber ...
3/8 Inch 1m * 15M Green High njupụta obere achicha Rubber
Black 5mm enwe ahụ iru ala Natural Rubber flooring Rol ...
Red 13mm Mmiri na-àmà Rubber ute flooring Tree gbaa
1m * 1m N'èzí-anọte Aka Green 30mm Rubber uloanumaanu Mats
20 "Ọtọ Bright okomoko Rubber Ft taịl
50cm * 50cm Yellow Full EPDM nsogbu dị iche iche N'èzí Rubber taịl
TOP Rubber pụrụ iche na roba flooring ihe karịrị 8 afọ dị ka a na-eduga emeputa na trading ụlọ ọrụ ngwakọta n'ụwa nile. Anyị isi na ngwaahịa ndị mgbatị n'ala, Ọtọ n'ala, Rubber agba ọsọ track na Garden usoro. Anyị nwere a aha ọma n'ihi mụ nnyefe, high quality, asọmpi price na ezi ọrụ. OEM dị.
Top roba bụ mgbe niile na-emepe emepe ọhụrụ roba n'ala cover maka zuru ụwa ọnụ ahịa, mere ka abịa na gị na saịtị na ndị kasị mma na mma n'ala. Anyị ugbu a na-enye ọrụ na ngwaahịa maka UK, Austria, Germany, na USA, India, Ireland, Spain, Belgium, Italy, France, na Canada, Brazil, African na Asia mba. Ọkọlọtọ anyị One-nkwụsị ọrụ anyị ahịa na-eweta elu afọ ojuju n'oge dum zụọ usoro. Professional otu òtù na-enwe ndidi na ahụmahụ na-edozi ahịa 'mbipụta niile. Anyị na-elu àgwà ngwaahịa na asọmpi price ke ahịa, na-ege ntị ahịa anyị banyere ha chọrọ ma na ntụziaka ha ezigbo flooring ngwọta. Anyị ọhụụ bụ iji nye gị ala ọrụ na kacha adabara n'ala.
G UKWUO >>
awade magburu onwe, saa mbara ahịa ọrụ ọ bụla nzọụkwụ nke ụzọ. Tupu ị ịtụ, ka ozugbo ase site ...
© Copyright: Top-Joy International Trading (Shanghai) Co., Ltd.All echekwabara.